Nepal Deep | कोसी अस्पतालमा कार्यरत ४६ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
विराटनगर। विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा कार्यरत ४६ जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा चिकित्सकसहित २५ जना स्वास्थ्यकर्मी छन्। अरु २१ जना कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको हो। एकै पटक धेरै जनामा कोरोना देखिँदा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले मंगलबारसम्म अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी गरेर ४६ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार संक्रमित हुनेमा ८ जना डाक्टर, १७ जना नर्ससहित परामेडिक्स, सफाई कर्मचारी लगायत छन्।
सामान्य अवस्थाका संक्रमितहरु अहिले ‘होम आइसोलेसन’मा छन्। ‘अस्पतालमा तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिए पनि सबै उपचार विभाग खुलाछन्। तर कर्मचारीलाई कोरोना भएका कारण व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ,’ डा.दासले भने,‘काम गर्न जनशक्ति अभाव हुन थाल्यो। अब स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनसक्छ।’
अस्पतालको जनशक्ति नै संक्रमित भएपछि सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ। परीक्षणसँगै संक्रमित हुने संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको उनले बताए। अझै संक्रमित थपिन सक्ने भएकाले अस्पताललाई कसरी नियमित सञ्चालन गर्नेभन्ने बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दासले दिए।
आज सुन तोलाको कतिमा कारोबार हुदैंछ ?
हिजो दोहोरो अंकले घटेको शेयर बजार आज झन्डै ९ अङ्कले बढ्यो
आज सुनको मूल्य ह्वात्तै घट्यो,कतिमा हुदैंछ किनबेच ?
सरकारले बढायो सार्वजनिक यातायातको भाडादर
आज नेप्से ८४ अंकले घट्यो
आज बढ्यो सुनको मूल्य,तोला कति पुग्यो ?
सलमानको कन्सर्टमा आखिर किन नआउने भइन् ज्याकलिन फर्नान्डिज-पूजा हेगडेलाई ल्याइने
अमेरिकी दुई रियालिटी शो नेपालमा ‘मेरो भ्वाइस कप’ र ‘मेरो डान्स कप’